SIDEE AYAY SONYO U AFDUUBTAY GUDIGGII BARANAAMIJKA SLNTV? | Toggaherer's Blog
« ARE YOU READY FOR A REAL LEADER, ARE YOU SURE YOUR VOTE IS GOIN
WAA MAHAD AL-LEE MUEUQ YEELA-NOO WAAN IS MUUJI-NEE!!!! »
SIDEE AYAY SONYO U AFDUUBTAY GUDIGGII BARANAAMIJKA SLNTV?
Bilawgii sanadkii 2007, waxa ay SONYO wadday barnaamij ka hadlayay waayaha dhalinyarada oo la damacsanaa in laga sii daayo SLNTV, hawshana waxa u ogolaaday maamulka SLNTV. Isla barnaamijkaas waxa waday urur kale oo dhalinyaro oo magaciisu yahay SEPO.
Guddoomiyaha ururkaas Xamse Suldaan Aadan Faarax iyo Agaasimaha Fulinta ee ururkaas Siciid Maxamuud Gahayr, iyana waxa ay u tageen masuuliyiinta SLNTV oo u ogolaaday in ay barnaamijkaas ka sii daayaan SLNTV, Maamulku waxa uu labada urur kula taliyay in ay hawshaas iska kaashadaan, maadaama oo ay isku ujeedo yihiin, dhalinyarona ay wada yihiin.
Hawshan waxa ka wada hadlay Agaasihii fulinta SONYO ee hore Mr Mustafe Maxamed Khayre iyo agaasimaha fulinta ee SEPO, Mr Siciid Maxamuud Gahayr, oo isla afgartay in ay hawsha si wadajir ah u fuliyaan iyada oo ay isla meel dhigeen in hawsha laga soo qaybgaliyo ururada dhalinyarada inta macquulka ah. Kadibna waxa la qabtay kulan
lagaga hadlayay waxyaabaha uu barnaamijkani ka hadli doono, kulankan waxa ka soo qaybgalay ururo ay ka mid yihii SOYDCO, SOMECO, SOLYCADO, iyo qaar kaleba inta aan ka xasuusto. Waxa kale oo la isla qaatay in la doorto guddi hawshan qabata iyada oo loo ballamay kulan kale.
Dhamaan kulanadi waxa ay ka dhacayeen xarunta SONYO ee badda cas.
Gudiga hawshan loo dooranayay oo dhamayd 7 qof, waxa u tartamay dhawr iyo toban qof, waxase loo doortay 7 qof oo ay ka mid ahaayeen.
1.Siciid Maxamuud Gahayr-SEPO.
2. Fu’aad- SONYO.
6. C/Qaadir Nuur Maxamuud
Iyo waliba inan (gabadh) aanan magaceeda hadda xasuusan.
Guddigani waxa ay go’aamiyeen in SONYO ay maalgelin u raadiso barnaamijka, lana sameeyo kaadhadh kii aqoonsiga ee gudigan , iyo in tababar dhanka saxaafada ah la siiyo gudigan. Hawshaana waa uu aqbalay Agaamihii SONYO, Mr Mustafe Maxamed Khayre, laakiin Mustafe waxa uu shaqada ka tagay iyada oo la sugayo fund kii hawsha lagu gali lahaa, waxaanu Mustafe ahaa aqoonyahan gudigga ula shaqeeyay si wanaagsan. Xilkii agaasimenimo ee SONYO waxa la wareegay Mr Barwaano.
Markii uu Barwaani talada qabtay ee uu fund kii barnaamijku soo baxay, waxa uu Barwaani daaqada ka saaray dhamaan Guddigii hawshan u xilsaarnaa, waxaanu suuqa ka qortay dad uu isagu rabay, oo uu u xilsaaray hawshii, tababarna uu siiyay, barnaamijkiina gacanta ku haya.
Mar uu gudigii hore la xidhiidheen Barwaani, oo ay waydiiyeen sida uu uga dulbooday gudiga, barnaamijkana uu u afduubay, waxa uu Barwaani ku jawaabay “Hawshaa muddoba dad kale ayaa loo xil saaray, ee hadii aad rabtaan tababar waanu idin siin”. Kamana uu qancin gabi ahaanba sababta uu uga dulbooday gudigii ka socday ururtay ee xilka ku qabtay doorashada xorta ah.
Mar aan waydiiyay mid ka mid ah gudigaas sida uu hawshan u arko waxa uu ku jawaabay “Awalba waan ogaa in SONYO tahay meel aan caddaalad lagu haynin, dad gaar ahina ay ku qadhaabtaan iyaga oo adeegsanaya magaca dhalinyarada, waxaanan is waydiin jirayba sida ay SONYO u ogolaan doonto in aanu hawsha wadno, maadaama oo aananaan SONYO ka tirsanayn, shaw sheekaduba waxa ay ahayd awrkay aan kugu kacsado”.
Haddaba hadii aan akhristeyaal su’aalo kooban idin waydiiyo:
1. Sidee ayaad u aragtaa habdhaqankan hogaanka SONYO ee aan ka sheekeeyay?
2. Ururkani ma yahay mid caddaalad dhalinyarada u samayn kara?
3. Dadka iyaga oo dhalinyaro ah sidan u dhaqmayo xil ka wayn ma u dhiibi lahaydeen?
Akhristeyaal in aad faaladiina mawduucan ku soo hagaajisaan ciwaankaygan:
WAXA QAYTA SADEXAD KU EEGI DOONAA MASIIRKA DHALIYARDA SOMALILAND IYO WAX LA GUDBOON
LASO QAYTA SADEXAAD ISLA MARKAAN AH QAYTA UGU
Farhan Mahamed Eggeh
This entry was posted on March 13, 2009 at 7:50 am and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.